काठमाडौं । पाँच वर्ष लागि नेपालको राज्यसत्ता सञ्चालनको लागि जनअनुमोदित भएको नेकपा सरकार आवधिक समयमा देश र जनताको निमित्त नतिजामुखि कार्य गर्ने भन्दा पनि पार्टीको आन्तरिक विवादमा फसेको छ । यतिवेला स्पष्ट विचार र राजनीति सहित सान्दर्भिक कार्यक्रमको तय गरि राष्ट्र विकासको दिशामा तिव्र गतिमा लाग्नुपर्नेमा आन्तरिक विवादमा गहिरोसँग अल्झिनुले राष्ट्रलाई गम्भिर क्षति हुन पुगेको छ भने नेकपाको भविष्य समेत अन्योलग्रस्त बन्न पुगेको छ । नेकपाको पछिल्लो अवस्थाबारे संसार न्यूजले नेकपाका कान्छा जिल्ला अध्यक्षसँग कुराकानी गरेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को जिल्ला स्तरिय नेतृत्वमध्ये उमेरले सबैभन्दा कान्छा जिल्ला अध्यक्ष (स्याङ्जा) सुर्यप्रसाद गैह्रे ‘पारस’सँग संसारन्युजका तर्फबाट गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
एउटा यूवा राजनीतिकर्मीको आँखावाट हेर्दा अहिले नेपालको राजनीति कहाँनेर छ ?
०६२/०६३ को आन्दोलनसम्म नेपाली राज्यसत्तामा एउटा सिमा थियो, केन्द्रिकृत अर्ध–सामन्ती व्यवस्था र सिमित जनअधिकार भन्दा माथि हामीले तत्कालिन राज्यसत्तावाट प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था थियोे । ०७२ सालको संविधान पश्चात नेपाली जनता आफ्नो भाग्य र भविष्यको फैसला गर्न सक्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् ।
राज्य र जनताको अधिकार र दायित्वको निर्धारण स्वयं हामीले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुवाट तय र समय सन्दर्भ फेरवदल गर्न सक्छौं । यसरी हेर्दा अहिले हामी राजनैतिक रुपमा अधिकार सम्पन्न भएका छौं, एक प्रकारले हाम्रो लोकतन्त्र र अधिकारको आन्दोलन करिव सम्पन्न भएको छ ।
तर, समृद्ध अवस्था र सुखी जिवनको लागि हामी अत्यन्तै पछाडी छौं । हामीले प्राप्त गरेको राजनैतिक अधिकार र दायित्वको आधारमा टेकेर समृद्धिको महाअभियान शुरुवात गर्ने र त्यसको समानुपातिक वितरण गर्ने आवश्यक विधि र संरचना वनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता हाम्रो अगाडि आएको छ । अर्थात समष्टिमा हेर्दा अहिले हामी सबै प्रकारको साधन सहित अधिकार सम्पन्न र व्यापक सम्भावनायुक्त राजनैतिक मैदानमा छौं ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र भुमीमा जनताको असमान पहुँच तथा सामाजिक सुरक्षामा दयालाग्दो अवस्था संगै कम्युनिष्ट सरकारको विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सरकारले मुल कार्यक्रमको रुपमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली लाई अगाडि बढाएको छ । हो, आवश्यक नीति निर्माण र कार्यान्वयनको सवालमा केही प्रश्नहरु उठेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र भुमिलाई मानिसले व्याक्तिगत हिसावले पुजीं आर्जनको क्षेत्र बनाउने वातावरणले गर्दा आम मानिसको आधारभुत अधिकारको विषयमा चिन्ता रहिरहने गरेको छ । जसले गर्दा समाजमा वर्ग खाडलको पुस्तान्तरण हुने समस्या झन बढ्दै गएको देखिन्छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको ईतिहास भनेको वर्ग संघर्षको ईतिहास हो । वर्तमान सरकारले जनताको आधारभुत सवालमा समान पहुँच हुने अवस्थाको लागि नीतिगत र संरचनात्मक आधार तयार गर्नुपर्दछ, जसलाई आगामी केही वर्षमा पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकियोस । दुखलाग्दो विषय के छ भने पार्टीमा अन्र्तविरोध र छलफल त छ, कतिपय ऐन, नियम र नीतिहरु बनिरहेका छन् तर ति विषयहरु तत्कालिन टालटुले प्रकृतिले मात्रै गर्न खोजिएको छ । विगतको आन्दोलन, कम्युनिष्ट नीति र समस्याको दिर्घकालिन सामाधानको कोणवाट भैरहेको छैन् । यसमा सरकारको भन्दा पनि समग्र हाम्रो पार्टीको भुमिका माथि प्रश्न उठ्ने स्थिति रहेको छ ।
अहिले सरकार माथि स्वेच्छाचारिता र भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ, आम जनतालाई कसरी जवाफ दिइरहनु भएको छ ?
भ्रष्टाचारको स्वभाविक न्यूनिकरणका लागि आम मानिसलाई राज्यले सामाजिक सुरक्षामा व्यवहारिक हिसावले विश्वास दिलाउन सक्नुपर्दछ । मुलतः शिक्षा, स्वास्थ्य, भुमी र सामाजिक सुरक्षाको चिन्ताको कारण नेता, कर्मचारी र जो सुकै मानिसले पनि अतिरिक्त पुजीं आर्जनको क्रियाकलाप गर्न खोजिरहेको छ । जसले गर्दा भ्रष्टाचारको लागि आम वातावरण सिर्जना भएको छ ।
समाजवाद उन्मुख संविधानमा नै टेकेर राज्यले जनताको आधारभुत दायित्व निशर्त निर्वाह गर्ने कानुन, नीति तथा संरचनाको तर्जुमा गर्न आवश्यक छ । अहिले यसको लागि आवश्यक पहल गर्ने काममा कमि देखिएको छ । प्रधामन्त्रीले भ्रष्टाचार विरोधी र समृद्धिको विषयलाई उठान त गर्नुभयो तर त्यसको कार्यान्वयनमा पार्टी र आम समन्वयको अभाव देखियो ।
आम भ्रष्टाचारको वातावरणको आधारमा नै नीतिगत र कार्यक्रमिक भ्रष्टाचार भएको छ । मेरो दृष्टिकोणमा केहि मानिसहरुलाई कारवाही गरेर मात्र नेपालमा भ्रष्टाचारको न्युनिकरण गर्न सकिदैन । समाजवादको सहि कार्यान्वयन नै भ्रष्टाचार न्युनिकरणको सहि तरिका हुनसक्छ, किनभने त्यहाँ राज्य र जनताको अधिकार र दायित्वलाई स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सीमित व्यक्तिहरुमा हुने भ्रष्टाचारलाई राज्यले निर्ममतापुर्वक कारवाही गर्न सक्छ । अब हाम्रो तहवाट अभियान शुरुवात गरेर समाजवादी संविधानको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सहयोग पुर्याउनुपर्छ भन्ने आवश्यकता मैले देखिरहेको छु ।
के अहिले सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ त ? सामाजिक सञ्जाल र आमप्रतिक्रिया हेर्दा त त्यस्तो देखिदैन । पार्टी कार्यकर्ताले के अनुभुती गरिरहेका छन ?
पहिलो, व्यवहारिक रुपमा धेरै प्रश्नहरु उठेका छन् जसलाई हामीले नजर अन्दाज गर्न सकिँदैन । तर एउटा विषय के महत्वपुर्ण हो भने कुनै महान उपलव्धिको लागि सो विषयमा धरातलिय यथार्थता बोकेको सपना देख्नुपर्दछ र त्यो सपना देख्ने काम प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्नुभएको छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको कार्यक्रममा पार्टीमा कुनै विवाद छैन, मात्रै होइन आम जनतामा समेत यो एउटा महान आशाको विषय बनेको थियो । जसका आधारमा हामीले झण्डै दुइतिहाइ मत हासील गरेका थियौं ।
तर यो सम्पुर्ण पार्टी, प्रतिपक्ष र आम जनताले अनुभुति गर्ने गरी कार्यान्वयन किन भएन भन्ने विषयलाई अब गम्भिरतापुर्वक समिक्षा गर्नुपर्ने भएको देखिन्छ । पहिलो, सरकार प्रमुखको कारणले वा पार्टीको कारणले कहाँनेर हामीले यसलाई उत्साहपुर्वक कार्यान्वयन गर्न सकेनौ ?
दोस्रो, मेरोे बुझाईमा यो कार्यक्रमको अर्थराजनीतिक आधार सहि ढंगले निर्माण गरिएको छैन्, जसले गर्दा यो एउटा महान अभियान हुन सकिरहेको छैन् । एउटा राजनैतिक नेतृत्वले राष्ट्र समृद्धिको सपना देख्नु अवश्य पनि नराम्रो विषय होइन तर यसको परिपुरक पाटोमा ध्यान दिईएन कि ? राज्यले अहिले गरिरहेको आम्दानीले मात्र हामीले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सक्दैनौ । जसको लागि अथाह पुँजी र जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । जुन कुरा राज्यले आफनो शास्त्रिय मान्यता नै बद्लेर बैकल्पिक आम्दानीतर्फ लाग्नुपर्दछ । जुन आम्दानीको धरातल वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणमा आधारित होस, अर्थात राज्यको दिर्घकालिन स्रोत होस ।
अहिले सरकारले भनिरहेको समृद्धिको यात्रामा आम्दानी र लगानिको नयाँ स्रोतको विषयमा छलफल त भैरहेको छैन । तपाईंले भनेको वैकल्पिक आम्दानी भनेको के हो, जुन दिर्घकालिन हुन सक्छ ?
व्यवहारिक कोणवाट हेर्दा अहिले राज्यले गरिरहेको आम्दानीको तरिकालाई पुरै बदल्न जरुरी छ, अर्थात उत्पादन र सेवा प्रवाहको आधारमा हामीले समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ । त्यो नै दिर्घकालिन र सहि मार्ग हो ।
यहाँको भुगोल र जनसँख्याको आवश्यकताको आधारमा राज्यले एकपटक वैज्ञानिक सर्वेक्षण गर्न आवश्यक छ । हामीले क्रमिक विकास र विकासको स्थायी मोडेलको अभ्यासमा जाने विषयको किटानी गरी सबै तहका सरकारहरुले त्यसलाई अवलम्वन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्दछ । हामीले देखिरहेका छौं, अहिले सबैले आफ्नो ईच्छा अनुसारको मात्रै काम गरिरहेका छन् । भंसार र अन्य करहरुमा सहभागिता जनाएतापनि विकासमा आम जनताको सहभागिता टाढिदै गएको छ ।
दैनिकी र दिर्घकालिन आवश्यकताको आधारमा सम्भावित उत्पादित क्षेत्रमा राज्य र नीजि क्षेत्रको लगानिलाई निश्चित गर्ने नीति र संरचना तयार गरी करिव १० खर्व वार्षिक व्यापार घाटा भएको आयातलाई विस्थापित गर्ने मोडेलमा सरकार तुरुन्त जानुपर्दछ ।
यसरी यूवाहरुले गर्ने श्रम, उत्पादन र सेवाको वितरणवाट निर्माण हुने पुँजी नै हाम्रो स्थायि स्रोत हो । आम मानिसको सामाजिक सुरक्षाको लागि राज्यले प्रत्येक क्षेत्रवाट आवश्यक कर उठाउने नीति अवलम्वन गर्नुपर्दछ । यो नै समाजवादी राज्यको सहि मोडेल हो ।
तपाईंले भनिरहेको कुरालाई हेर्दा कतै युगको आवश्यकता र नेतृत्वको क्षमताबीचको तालमेल नमिलेको त होइन ?
अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दा सरकार र पार्टी वा जुनसुकै क्षेत्रमा भएको मानिसले पनि समृद्ध देश बनेको देख्न चाहेको छ । अहिलेको पुस्ताको यूवाहरुको कुरा गर्दा कसैले पनि छलछामको राजनीति मन पराएको देखिदैन । सबैले पारदर्शि हिसाबले देशको विकास गर्ने नेतृत्वलाई खोजिरहेको देखिन्छ ।
हामी सबैलाई थाहा छ, नेकपाले निर्वाचनमा स्थायी सरकार र समृद्धिको नारामा चुनाव जितेको हो, अर्थात जनताले वर्तमान नेकपा सरकारवाट राजनैतिक समस्याको निकास र विकासको लागि अभिमत प्रकट गरेको हो । घोषणापत्रको आधारमा वर्तमान सरकारले जनताको अपेक्षा पुरा गर्न सकेन भन्ने गुनासो देखिएको छ । यहाँनेर एउटा समिक्षाको प्रश्न उभिएको छ, समृद्धिको सपना बाँडने नेतृत्व असक्षम हो वा हामीले सपनाको कार्यान्वयनमा असहयोग गरिरहेका छौं ? नेतृत्व भनेको पुर्णत सक्षमताको प्रर्दशन पनि हो र हुनुपर्दछ, अन्यथा नेतृत्व तत्कालिन संगठनात्मक नेता वन्न सक्दछ तर राजनेता कहलाउन सक्दैन ।
यहाँनेर हामी कसैले पनि ढाँटन सक्ने वातावरण छैन् । हो अहिले समृद्धिको सपनाको कार्यान्वयनमा गम्भिरतापुर्वक प्रश्न उठेको छ । समयले समस्या र निकास दुवै लिएर आएको हुन्छ । अहिले समग्र विश्वमा देखापरेको कोरोना महामारीले हामीलाई समृद्ध एवं स्वाभिमानी राष्ट्र निर्माणको निमित्त नयाँ विचार, नेतृत्व र पार्टीको निर्माण गर्ने शन्देश दिएको छ । तर हामीले सकिरहेका छैनौ । हामी परम्परागत समस्या भन्दा माथि उठ्न सकेका छैनौ ।
भर्खरैको महामारी र विश्वका दुई महाशक्तिशाली अमेरीका र चीनको व्यापार युद्धले अब निर्यातमुखी वा आयातमुखी अर्थराजनीति होइन स्वाभीमानी र आत्मनिर्भर अर्थराजनीति अंगाल्न शिक्षा दिएको छ । हामीले विगतका आन्दोलनको जनादेश र समाजवाद उन्मुख संविधानको मर्मलाई नेपाली सापेक्षतामा ईमान्दारीतापुर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको सपनाको सजिलै कार्यान्वयन गर्न सक्छौं । सजिलै र छिटै समाजवादी राष्ट्र निर्माण गर्न सक्छौं ।
तपाईंको विचारमा अहिलेको समयले मागेको नेतृत्व कस्तो हो र के यहि पार्टिवाट सम्भव छ ?
नेकपाका हामी आम कार्यकर्ताले युग अनुकुल नेतृत्वको विषयमा छलफल गरिरहेका छौं, हुनुपर्छ बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी सबैको मत रहेको छ । तर अहिले सम्म हामीले सँगठित हिसावले छलफल भने गरिरहेका छैनौ । मेरो बुझाइमा अब हामी युग अनुकुल विचार र नेतृत्वको विकासको सन्दर्भमा विधिवत छलफलको माध्यमवाट सिघ्र निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ । अन्यथा आधुनिक युगको तिव्र गतिमा हामी यो शताव्दि समृद्धिको सवालमा पछाडि परिरहने छौं ।
पहिलो, हामीले संवैधानिक रुपमा दलिय व्यवस्थालाई स्विकार गरिसकेको सन्दर्भमा सबैै पक्षको सन्तुलनको विचवाट आवधिक समयमा राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नसक्ने गतिशिल नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो । दोस्रो, अवको युगमा नेतृत्व र विचार निषेधको राजनीति पनि समाप्त भएको छ । त्यसैले उत्तम विचार र व्यवहारमा नतिजा दिनसक्ने नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो ।
नेपाली क्म्युनिष्ट आन्दोल जुन विरासतवाट विकास हुँदै आएको भएतापनि यसको तथ्यहरुलाई हेर्दा वर्तमान व्यवस्था निर्माणमा यसको अहम भुमिका रहेको छ । त्यसैले सक्षमताको प्रश्न त त्यति सान्दर्भिक होइन तर ईच्छाको प्रश्न भने गर्न सकिने अवस्था रहेको छ ।
सरकारको क्रमशः असफलता, पार्टीभित्रको अन्तरविराेध, अन्य पार्टीहरुको स्थिति र समाजमा विकास हुँदै गइरहेको निराशालाई हेर्दा तत्काल राजनैतिक स्थिरता हुने देखिदैन नि ?
पार्टीहरुमा अन्र्तविरोध विकसित र स्थिर व्यवस्था सञ्चालन गरेका देशहरुमा पनि भइरहेको छ । समस्यामा बढि र समाधानमा कम अन्तरविराेध यो आम सामाजिक राजनैतिक रुपमा प्रकट हुने विषय हो । विश्वसँग तुलना गर्दा हामी गरिवी र समस्यामा छौं । निर्वाचित आवधिक सरकारले समृद्धिको सवाललाई दह्रोसँग उठान गरेको छ । तर कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ ।
मलाई लाग्छ अहिले हाम्रो पार्टीमा जे जसरी अन्र्तविरोधका विषयवस्तुहरु अभिव्यक्त भएतापनि सपना कार्यान्वयनमा देखिएको विषय वस्तुमा नै आधारित छन् । यदि यसलाई सकरात्मक रुपमा ग्रहण गर्ने हो भने सबै राजनैतिक व्याक्तिहरु एक अर्कामा आफुलाई अव्वल र वैकल्पिक नेतृत्वको रुपमा स्थापित गर्न चाहन्छन् । नेकपामा भएका बहुसँख्यक दावेदार नेतृत्वको कारण पनि केहि समस्या भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । पार्टीमा भएको वहुसंख्यक नेतृत्वको क्षमतालाई समृद्धिको सपनाको कार्यान्वयनमा कसरी केन्द्रित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरासँग नै यसको निचोड रहेको छ र हामीले आशा गर्नुपर्दछ कि अब छिट्टै नै यसको निष्कर्षमा पार्टी नेतृत्व पुग्नेछ ।
त्यसैले समस्या देखाउने र रोमाञ्चित हुनेहरुलाई हिसाब नगर्ने हो भने सरकारको काम कारवाहीको सन्दर्भमा जे जति टिका टिप्पणी भइरहेका छन त्यसलाई शिक्षाको रुपमा ग्रहण गर्ने हो भने हामीले राजनैतिक आन्दोलन मार्फत प्राप्त गरेको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्य विकल्प अहिले देखिइसकेको छैन् ।
समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली र समाजवादको सपना कार्यान्वयन गर्न तपाईंको आफ्नो विचार के छ ?
गलत नियत वोकेका केहि विचौलिया र शक्तिमा पुगेपछि छिद्र खोज्ने वा नेतृत्वसँगको सम्बन्धलाई दुरुपयोग गर्न खोज्नेहरुले अहिले अन्र्तविरोधलाई अन्यथा जोडिरहेका छन् । यसलाई नेतृत्वले सहि ढंगले पहिचान गरि समाधानमा जान जरुरी छ ।